Paul Pogba oo Hal Shuruud ku xiray in uu sii joogo Manchester United? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Paul Pogba oo Hal Shuruud ku xiray in uu sii joogo Manchester United?
Published on September 13, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(14-9-2018) Wararkii ugu danbeeyey ee laga helay xaalada Cayaaryahanka Manchester United ee Paul Pogba ayaa sheegaya in uu shuruud ku xiray sii joogista kooxdaas Shuruudaas oo ah mid adag.
Paul Pogba oo uusan fadhin mustaqbalkiisa Manchester United isla Markaana ay u gacan haatinayaan kooxaha Juventus iyo Barcelona ayaa lasheegayaa in kaliya uu sii joogi doono kooxda United hadii shaqada laga cayriyo Jose Mourinho isla Markaana lakeeno Zinedine Zidane.
Sida laga sii daayey Rai Sport Wakiilka Cayaaryahan Paul Pogba Mino Raiola ayaa Juventus ku wargeliyey in ay diyaar garoobaan maadaama Mustaqbalka Xiddigaan uu ku xiranyahay sii joogista Jose Mourinho kaas oo laftiisa beryahaan layska dhex marayey in lagu badali doono Macalinkii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane kaas oo laftiisu shuruudo adag ku xiray qabashada Manchester United.
Xiddiga ku Guuleystey koobka aduunka oo Manchester United ku biirey 2016 ayaa doonaya in uu ka dhaqaajiyo Old Trafford dibna ugu laabto Turin kadib markii qilaaf ba.ani soo kala dhex galay isaga iyo Macalinkiisa Jose Mourinho.